Akriso Qoraalka Sababay Mudaharaadka Ardayda Nuuradiin School Qaybta Inamada | Mandheera News
March 3, 2021 - Written by admin
DUGSIGA NUURADIIN IYO COVID19
Maahmaah ayaa tidhaahda: nin ceel guntii galay ama ka soo warran ama ku dun. Waxa aan qormadan idinku la wadaagayaa ceelka aan guntiisa galay ee xogtiisa hayo, dugsiga sare ee inammada ee Nuuradiin. Maxaa ka run ahaa muuqaalkii laga soo duubay iskuullada ee quruxda badnaa? Hungo.. Been.. Waxisdabamarin.. Mooji..
Si aynu isu la jaanqaadi karno waxa aan kaa codsanayaa in aad soo daawato muuqaalkii xayaysiiska ahaa ee maamulka dugsigu ku sheegayay in uu ardayda badqabkooda kaga talinayo, se aan waxba ka jirin:
Ugu horraynba ma is waydiisay sababta videoga looga xidhay faallooyinkii(comment)? Waxa weeye si aan ardaydu waa xogogaale u odhan: “Halkaad Cali Sharmaarkow na tidhi, waa huf iyo been.” Ujeedkii xayaysiiska ahaana meesha uga bixin. Waxa iyaduna jirta in ardayga la xiniinyasiibo si aanu u hadlin, oo ka dhiirrada ee wax qora waa la cadaadiyaa ama la eryaa hadduu weli arday ka yahay iskuulka, haddii kale oo uu ardaydii baxday ahaa na si uun loo furdaamiyo: wadahadal, shaqo iwm. “Dhudhumadiyo eebbow nin xidhan, dhaadadkaan ahay.”
Waxa aan mid mid isu dul taagi doonaa qalabyadaas ay sheegeen maamulku in ay soo kordhiyeen si ay fayoqabka ardayga u waardiyeyaan.
1 Qalabka xummadda
Ugu horrayntaba waxa ay tahay in aynu isla ogaanno in nimanka dharka cad loo xidhay ee xummada eegaya ay yihiin labada askari ee bixidda iyo soo galidda ardayda ka shaqayn jiray iyo ilaaliyaha iskuulka, Xadhigo oo aragtidayda ah ninka ugu xaruurisan ee dugsiga jooga. Wax sidaas u sii wayn ma aha oo waa loo sheegi karayaa in qofka 37°C ka bata ay qabtaan, laakiin goorma ayay sifada xummaddu qofka ka soo muuqataa? Miyaanay ahayn marka qofka xanuunkii soo rito ee sambabka gaadho? In wax kale lagu eego mooyaane, qof 7dii maalmood ee u horraysay ku jira xummad la gu ma ogaan karo.
2 Sanitizer Shampoo
Qodobka in aan ka boodo ayaa ba habboonayd, maaddaama aanay waxba ka jirin oo maalinta duubitaanka xayaysiisku noogu dambaysay.
Saddex taangi oo midkiiba illaa 10litre qaadayo ayaa laga qotomiyay daaradda iskuulka. Biyo cad ayaa lagu shubay, wax shaamboo ah na la ma dhigin maalintii guddidi Karoonuhu iman gaadhay oo aynu xaga dambe kaga sheekayn doonno mooyaane.
4 Sanitizing tunnel
Waa qol yar oo ugu badnaan 1m² laba dhinac ka furan ah. Dusha ayuu dhibco yar yar oo buufismaya kaga daadinayaa qofka dhex maraya. Markan xayaysiiska la duubayo qofka dhex maraya ee is wareejinayaa marka caadiga ah hal tallaabo ayuu ku dhaafaa. Waa se la amray in uu gacmaha kor u taago oo isku gilgilo si dhibcuhu u wada gaadhaan, waa na been.
Biyaha ka buufismaya qolkan aad ugu ma dambaabi karo e laakiin wax ur ah oo caddayn kara in aanay biyo cad ahayn ma laha. Sidoo kale, markii aan caddaymaha urursanayay waan dhadhamiyay oo biyaha caadiga ah iiga ma duwanayn.
Xayaysiiskii la duub, faaf oo dadkii arke. Waxa haddaba dhacay wixii ugu layaabka badnaa. Waa in la sheegay in wasiirka waxbarashada iyo guddida karoonuhu dugsiga soo booqanayaan. Subxaan..
Subax ayaannu sidii dhici jirtay xaadirnay iskuulka, laakiin si aan dhici jirin ayaa socota. Ugu horrayn, qolkii la dhex mari jiray ayaan biyihii ka da’ayay ka dareemay ur iyo in dawo lagu daray. Soo dhaafay, oo xiisaddii hore ba maaskiga afka lagu daboosho ayaa loo qaybiyay dhawr fasal oo kaygu ku jiro oo la doonayo in guddida iman doonta la mariyo. Si wixii ka muuqda shaashaduhu u rumoobaan waxa la fasaxay ardaydii form1ka ahayd. Ujeedka laga lahaa fasaxooda waxa loogu sheegay in ay soo eegtaan imtixaannadoodii ay 8ka kaga soo gudbeen ee la qiimeeyay, 3 maalmood ayaa la fasaxay! Laakiin ujeedka dhabta ahi wax uu ahaa in ardayda ku cabbaysan fasallada kale lagu kala filqiyo galaasyadan laga fasaxay ardaydoodii. Sida caadiga ah fasalka 7m×9m ah waxa lagu dhigtaa ugu yaraan 90 arday, laakiin maalintan waa la kala fudaydiyay ardaydii oo waxa dhacaysay in fasalladii 1ka la isugu geeyo arday fasalka 4aad laga soo fudaydiyay iyo mid form3 laga keenay. Waxba looma dhigayo, saa isku duruusba ma aha e.
Maamulaha dugsiga innamada ayaa na soo maray. Wax uu afbuuxa na gu yidhi: “Waxba naqaska ha isku dhajinina e, marka wasiirku yimaaddo un la soo baxa o xidha —maaskiga!” Waxa kale oo uu noo sheegay in fasallada wasiirka la marin doono aannu ka mid nahay sidaas darteed na looga baahan yahay in ardayga jawaabi doona iyo waxa hh odhan doonaba la sii xulo. “Wixii ina ga dhexdeenna ah waynu xallin doonnaaye, wasiirka si loojig ah ula hadla oo waydiiya top10kii in uu soo celiyo” iyo waxyaabo kale oo majarehabaabin ila ah ayuu na yidhi. Aniga ayaa la yidhi ha hadlo, se waan ka cudurdaartay oo “Qasab kuma balwayn karo”.
Sida maalinlaha ah 7 xiisadood ayaa la dhigtaa, oo waa 4 hore iyo saddex dambe oo nususaac u dhaxeeyo. Maalintani ma aha mid caadi ahe markii 2 xiisadood la galay ayaa la nususaaceeyay si waxa ardaydu isticmaalaan xashiishkooda iskuulka daaraddiisa looga nadiifiyo, oo aanay indhaha guddida kahortagga cudurku u qaban nadaafadxumo. Waxa la biyeeyay taangiyadii faraxalka oo mid kasta shaamboo iyo soofti la dur saaray, ardaydii ayaa kaadida lagu celiyay oo qof dibadda maraya waa la la dagaallamay.
Maalintaas way ku hungoobeen. Maalin dambe ayay guddigii tageen qaybta hablaha oo iyaduna sidan oo kale ka socotay. Waa sida ay rabeen e waxa la mariyay dhawr fasal oo arday gloves iyo mask xidhani fadhiyaan, waana laga duubtay.
Sida uu u jiro qof keenadiid ahi, ayuu u jiraa mid awrkiraale ahina. Wax aan u jeedaa in aan dhaho: fasalkaygu sida ay u diideen in ay raxleeyaan ayay u jireen arday kale oo maamulka arrinkaas ka saaciday kuwaasina waa isla kuwa maamulka u soo basaasa meesha iyo qofka iyaga ka sheekaynaya.
“Musuqmaasuq Soomaali waa, meheraddeedii.”
Share garee, si dad badani u arkaan farriinta